धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेसनले निर्माण गरिरहेको रंगशालालाई प्रदेश सरकारले दियो रु.३ करोड। - Malayakhabar
होम पेज देश धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेसनले निर्माण गरिरहेको रंगशालालाई प्रदेश सरकारले दियो रु.३ करोड।
काठमाडौं := धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेसनद्वारा चितवनमा निर्माणाधीन क्रिकेट रङ्गशालाको लागि वाग्मती प्रदेश सरकारले रु. ३ करोड रकम हस्तान्तरण गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालय हेटौँडामा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा मुख्य मन्त्री डोरमणि पौडेलले फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल र उपाध्यक्ष कुन्जना घिमिरेलाई रु. तीन करोड रकमको चेक हस्तान्तरण गरे।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले धुर्मुस सुन्तलीले उत्साहका साथ काम गरेकामा प्रशंसा गर्दै रङ्गशाला निर्माणको गति तीब्र भएकामा खुशी व्यक्त गरे। उनले रङ्गशाला निर्माण परियोजना छिटो सक्नका लागि शुभकामना दिए। मुख्यमन्त्री पौडेलले रङ्गशाला निर्माणमा धेरै चुनौतीहरु रहेकाले सबै क्षेत्र मिलेर यसलाई सफल बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अघिल्लो लेख के तपाईं अमेरिका जाने सोचमा हुनुहुन्छ ? खुल्याे २०२२ को डीभी,फारम भर्नुहोस्।
पछिल्लो लेख डीभी आवेदन खुल्यो, कसरी भर्ने ?